एउटै गोत्रमा किन विवाह वारी हुँदैन ? कारण जान्नुहोस् ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/एउटै गोत्रमा किन विवाह वारी हुँदैन ? कारण जान्नुहोस् !
काठमाडौँ । गोत्र शब्दको अर्थ हो बंश र कुल । गोत्र प्रणालीको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि ब्यक्तिको प्रचीनतम ब्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । उदाहरणको लागि कुनै पनि ब्यक्तिको गोत्र भरद्वाज हो भने त्यस्को अर्थ हो है त्यो ब्यक्तिको बंश वैदिक ऋषि भरद्वाजबाट शुरु भएको हो । अर्थात त्यो ब्यक्तिको जन्म ऋषि भरद्वाजको पीढीमा भएको हो ।
तपाइँलाई एकै गोत्रमा विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने चलनबारे तपाइँलाई थाहै होला ।